Nosoratan’i Jaona 4:1-54
Jesosy sy ilay vehivavy samaritanina (1-38)
Mivavaka amin’Andriamanitra “araka ny fanahy sy ny fahamarinana” (23, 24)
Be dia be ny Samaritanina nino an’i Jesosy (39-42)
Nanasitrana ny zanakalahin’ny tandapa iray i Jesosy (43-54)
4 Fantatry ny Tompo fa henon’ny Fariseo hoe betsaka kokoa noho ny mpianatra azon’i Jaona ny azon’i Jesosy sy nataony batisa.+— 2 Tsy i Jesosy anefa no nanao batisa fa ny mpianany.— 3 Koa rehefa fantany izany dia niala tany Jodia izy, ka nankany Galilia indray. 4 Tsy maintsy nandalo tao Samaria anefa izy, 5 ary tonga tao amin’ny tanàna samaritanina atao hoe Sykara, teo akaikin’ilay tany nomen’i Jakoba an’i Josefa zanany.+ 6 Tao, raha ny marina, no nisy ny lavadranon’i Jakoba.+ Reraky ny dia i Jesosy, ka nipetraka teo amin’ilay lavadrano.* Tamin’ny ora fahenina* teo ho eo tamin’izay. 7 Nisy vehivavy samaritanina iray tonga hantsaka. Hoy i Jesosy taminy: “Mba omeo rano aho hosotroiko.” 8 —Fa lasa nividy sakafo tany an-tanàna ny mpianany.— 9 Dia hoy ilay vehivavy samaritanina: “Jiosy ve ianao dia mangataka rano amiko, nefa izaho vehivavy samaritanina?”—Tsy mifandray amin’ny Samaritanina mantsy ny Jiosy.+— 10 Dia hoy i Jesosy: “Raha mba fantatrao mantsy ilay fanomezana maimaim-poana avy amin’Andriamanitra,+ sy ilay miteny aminao hoe: ‘Mba omeo rano aho hosotroiko’, dia ianao no ho nangataka taminy, ka ho nomeny rano velona.”+ 11 Hoy ilay vehivavy: “Ianao aza, tompoko, tsy manana fanovozana akory sady lalina ny lavadrano, koa ahoana no anananao an’izany rano velona izany? 12 Ianao angaha lehibe noho i Jakoba razambenay? Izy no nanome anay an’ity lavadrano ity, sady izy sy ny zanany ary ny biby fiompiny no nisotro teto?” 13 Dia namaly i Jesosy hoe: “Izay misotro an’ity rano ity dia mbola hangetaheta indray, 14 fa izay misotro ny rano homeko azy kosa tsy hangetaheta intsony mihitsy.+ Fa ho loharano miboiboika ao anatiny ilay rano homeko azy, ka hanome azy fiainana mandrakizay.”+ 15 Hoy àry ilay vehivavy: “Mba omeo an’izany rano izany aho, tompoko, amin’izay tsy hangetaheta na hiverimberina hantsaka eto intsony.” 16 Dia hoy izy: “Mandehana antsoy mankatỳ ny vadinao.” 17 “Tsy manambady aho”, hoy ilay vehivavy. Dia hoy i Jesosy: “Marina ny teninao hoe tsy manambady ianao. 18 Fa efa nanana vady dimy ianao, ary tsy vadinao ilay lehilahy miara-mipetraka aminao izao. Koa marina ny teninao.” 19 Dia hoy ilay vehivavy: “Tena mpaminany+ ianao, tompoko. 20 Nivavaka teto amin’ity tendrombohitra ity ny razambenay, nefa ianareo milaza fa any Jerosalema ny olona no tokony hivavaka.”+ 21 Hoy i Jesosy: “Ravehivavy, minoa ahy ianao fa ho avy ny fotoana ka tsy ho eto amin’ity tendrombohitra ity na any Jerosalema no hivavahanareo amin’ny Ray. 22 Mivavaka amin’izay tsy fantatrareo+ ianareo, fa izahay kosa mivavaka amin’izay fantatray, satria avy amin’ny Jiosy ny famonjena.*+ 23 Na izany aza, ho avy ny fotoana, ary efa izao izany, ka ny tena mpivavaka hivavaka amin’ny Ray araka ny fanahy sy ny fahamarinana. Fa olona hoatr’izany mihitsy no tadiavin’ny Ray mba hivavaka aminy.+ 24 Andriamanitra dia Fanahy,+ ka izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka araka ny fanahy sy ny fahamarinana.”+ 25 Hoy ilay vehivavy: “Fantatro fa ho avy ny Mesia, ilay atao hoe Kristy, ary rehefa tonga izy, dia holazainy amintsika tsara daholo ny zava-drehetra.” 26 Dia hoy i Jesosy: “Izaho izay miresaka aminao izao no izy.”+ 27 Tamin’izay no tonga ny mpianany ka gaga, satria niresaka tamin’ny vehivavy izy. Tsy nisy niteny taminy anefa hoe: “Fa misy zavatra ilainao angaha?”, na hoe: “Fa maninona ianao no miresaka aminy?” 28 Navelan’ilay vehivavy àry ny sininy, dia lasa izy nankany an-tanàna ka niteny tamin’ny olona tao hoe: 29 “Avia ange ianareo e! Misy lehilahy izay arỳ, dia nolazainy tamiko daholo izay zavatra nataoko. Izy angamba no Kristy!” 30 Dia niala tao an-tanàna ireo ka nankany amin’i Jesosy. 31 Nandritra an’izay fotoana izay, dia nampirisihin’ny mpianany izy hoe: “Mihinàna, Raby+ ô!” 32 Hoy anefa izy: “Izaho manana sakafo tsy fantatrareo.” 33 Nifanontany àry ny mpianatra hoe: “Fa angaha nisy nitondra zavatra hohaniny teo?” 34 Hoy i Jesosy: “Ny sakafoko dia ny manao ny sitrapon’Ilay naniraka ahy+ sy ny mahavita ny asany.+ 35 Milaza ianareo hoe mbola misy efa-bolana vao ho tonga ny fijinjana, sa tsy izany? Izaho kosa milaza aminareo hoe: Jereo ange ny saha e, fa efa masaka hojinjaina ny vokatra.+ Efa 36 mahazo karama sahady ny mpijinja sady efa manangona vokatra ho amin’ny fiainana mandrakizay, mba hiara-mifaly+ ny mpamafy sy ny mpijinja. 37 Marina àry ilay fitenenana hoe: Ny iray mpamafy, fa ny iray mpijinja. 38 Naniraka anareo hijinja izay tsy nisasaranareo aho. Olon-kafa no nisasatra, nefa ianareo koa mba nahazo tamin’izay nisasarany.” 39 Be dia be ny Samaritanina avy ao amin’io tanàna io no lasa nino an’i Jesosy, noho ilay vehivavy nijoro ho vavolombelona ka niteny hoe: “Nolazainy tamiko daholo izay zavatra nataoko.”+ 40 Rehefa tonga teo aminy àry ny Samaritanina, dia nangataka azy mba hijanona teo amin’izy ireo, ka nijanona tao roa andro izy. 41 Vokatr’izany, dia nisy olon-kafa be dia be koa nino noho ny tenin’i Jesosy. 42 Ary hoy izy ireo tamin’ilay vehivavy: “Tsy noho ny teninao intsony fotsiny izao no mahatonga anay hino. Izahay mihitsy mantsy no naheno, ka fantatray fa io lehilahy io tokoa no mpamonjy an’izao tontolo izao.”+ 43 Niala tao i Jesosy, rehefa afaka roa andro, ka nankany Galilia. 44 —Izy mihitsy anefa no nilaza fa tsy mba hajaina ny mpaminany raha ao amin’ny taniny.+— 45 Rehefa tonga tany Galilia àry izy, dia nandray azy ny Galilianina, satria efa hitan’izy ireo daholo ny zavatra nataony tany Jerosalema tamin’ny andro fety.+ Efa tany amin’ilay fety koa mantsy izy ireo.+ 46 Tonga tany Kana any Galilia indray izy avy eo, tany amin’ilay nanovany rano ho divay.+ Ary nisy tandapa nanana zanakalahy narary tany Kapernaomy. 47 Henon’io lehilahy io fa niala tany Jodia i Jesosy ary tonga tany Galilia. Dia nandeha tany amin’i Jesosy izy, ka niangavy azy hidina any Kapernaomy mba hanasitrana an’ilay zanany efa ho faty. 48 Hoy anefa i Jesosy: “Tsy hino mihitsy ve izany ianareo, raha tsy mahita famantarana sy fahagagana?”+ 49 Dia hoy ilay tandapa: “Mba andao re, Tompo ô, dieny mbola tsy maty ny zanako.” 50 Hoy i Jesosy: “Mandehana fa velona ny zanakao.”+ Nino ny tenin’i Jesosy ilay lehilahy ka lasa nandeha. 51 Tamin’izy mbola teny an-dalana niverina hody iny, dia nitsena azy ny mpanompony ka niteny taminy hoe velona* ilay zanany. 52 Nanontaniany àry izy ireo hoe tamin’ny firy ilay zanany no nihatsara. Dia hoy izy ireo: “Omaly tamin’ny ora fahafito* izy no tsy nanavy intsony.” 53 Dia fantatr’ilay rainy fa tamin’izay ora izay mihitsy i Jesosy no niteny taminy hoe: “Velona ny zanakao.”+ Lasa mpino àry izy sy ny ankohonany manontolo. 54 Izany no famantarana faharoa+ nataon’i Jesosy tamin’izy niala tany Jodia ka tonga tany Galilia.
^ Na: “fantsakana; loharano.”
^ Izany hoe tamin’ny 12 antoandro teo ho eo.
^ Na: “satria ny Jiosy no fiandohan’ny famonjena.”
^ Na: “nihasitrana.”
^ Izany hoe tamin’ny 1 tolakandro teo ho eo.